lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo kwiselfowuni ye-windows 10 – Ukusekela Windows 10
lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo kwiselfowuni ye-windows 10
Lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-Bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo
Ukuba ucinezela iqhosha elithiQhagamshelakwiziko lentshukumo akusifumani isixhobo sakho esenziwe sasebenza kwi-Bluetooth, zama oku:
Qinisekisa isixhobo se-Windows sakho sixhasa i-Bluetooth nokuba silayitiwe.
Uza kubona iqhosha le-Bluetooth kwiziko lesenzo.
Qiniseka ukuba isixhobo sesandi esenziwe sasebenza se-Bluetooth silayitiwe yaye siyafumaneka. Indlela yokwenza oku kwahlukile kwisixhobo, ngoko hlola inkcazelo eze kwizixhobo okanye uye kumvelisi wewebhusayithi.
Ukuba ukhangela izixhobo ezenziwe zasebenza ze-Bluetooth ngaphandle kwesandi, yiya kwikhasi leeSetingi ze-Bluetooth. Yiya kokuthi Iisethingi, khetha Izixhobo, khetha i-Bluetooth, khetha isixhobo, khetha Shenxisa isiXhobo, emva koko uzame ukudibanisa kwakhona.
Ukuba ucinezela iqhosha elithi Qhagamshelakwiziko lentshukumo akusifumani isixhobo sakho, zama oku:
Qinisekisa isixhobo se-Windows sakho sixhasa i-Miracast ngokujonga inkcazelo ephume naso okanye ngokuya kwiwebhusayithi yomvelisi.
Qiniseka i-Wi-Fi ivuliwe.
Qinisekisa ukuba umboniso ofuna ukubonisa kuwo uyayixhasa i-Miracast nokuba ilayitiwe. Ukuba akuyixhasi, uza kudinga iadaptha ye-Miracast (ngamanye amaxesha ebizwa ngokuba yi-“dongle”) engena kwiphothi ye-HDMI.
Previous Previous post: indlela yokusebenzisa iialam kwi-windows 10
Next Next post: lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo kwi-windows 10